Date My Pet » 6 Karazam-vehivavy lahy mitady
Last nohavaozina: Sep. 26 2020 | 3 min namaky
Inona no vehivavy mitady lehilahy? Io no fanontaniana iray amin'ny maro valin-. Misy ry zalahy mitady firaisana ara-nofo baomba amin'ny vatana tonga lafatra sy ny toe-tsaina Diva, kosa ho an'ny hafa ny vehivavy playful mahasarika kokoa. Misy ry zalahy mila ny vehivavy iray mikarakara azy ireo, tahaka ny reny zatra. Misy ihany koa ireo izay kely ny zava-miafina, na fahatsapana ho antonony fahaleovantena tena manintona. Raha tsy mody fa reraka mety rehetra, eto dia enina karazana lehilahy maro vehivavy mitady:
Ny firaisana ara-nofo baomba
Izany no karazana vehivavy voalohany izay tonga ao an-tsaina na iza na iza ny, rehefa miezaka vao hahalala izay karazana kokoa ny vehivavy mba hisarihana ny olona amin'izao fotoana izao. Marina izany: ny firaisana ara-nofo baomba hanao 99% ny olona miala ny lohany rehefa tonga teny amin'ny arabe. Izany dia tena mahasarika lalàn'ny! Na izany aza, Afaka matoky ianao: Tsy ireo vehivavy ihany lahy mitady! Raha ny marina, rehefa mitady fifandraisana maharitra, ny sasany aza ry zalahy dia tsy firaisana ara-nofo baomba.
The jaza vehivavy
Efa renareo izany imbetsaka: ny olona tsy hitombo tanteraka. Dia milalao ny kilalao sy ny lalao video ny fiainany rehetra. Raha izany dia tsy marina ny isan 'ny olona mihaona aminao, Tokony ho fantatrao ianao dia misy ireo izay mahatsapa tia-jaza ny vehivavy, ny fijery tsara toe-tsaina ny fiainana, ny playful tsiky izay lightens ny efitrano. Efa mba nanontany tena hoe nahoana no matetika ry zalahy be taona nahasarika ny maro ny vehivavy tanora kokoa? Mety ho antony!
Ny reny karazana
Voalaza fa ny vehivavy mitady ny rainy endrika, sy ny olona noho ny dika mitovy ny reniny. Nahoana? Dia manazava ny psikology rehetra momba ny teny / Anarana nitranga fahiny isika rehetra hanana nandritra ny fahazazany. Afa-tsy izany, misy olona avy tao izay, nefa tsy misogynists, toy ny fizarana ny fiainany tamin'ny vehivavy iray izay mikarakara ireo filàna fototra, handrahoana sakafo sy manadio. Fantatra ihany koa ho toy ny "mpikarakara tokantrano", ny reny toy ny karazana lehilahy maro vehivavy ny tonga lafatra.
Rehefa ho hariva Pal
Mahafantatra: foana ny olona tsy araka ny tena Anarana sy lafiny sexiest! Misy ireo izay mankasitraka Pal tsara izay mahatakatra ny vazivazy, mizara ny tiany toy ny fanatanjahan-tena mpankafy, ary mahafantatra ny fomba hiatrehana ny lalao hampionona. Dia ny zon'ny vehivavy raha ao an-dakozia? Tsy voatery ho! Fa ry zalahy ireo, ny tsara indrindra ihany vehivavy dia manohana ny ekipa mpanao baolina kitra, ary dia fahavalo tsara ny toerana tena fiara fifaninanana lalao video. Na izany aza, ny zavatra mety hiova ao amin'ny efitra fatoriana, izay mety tsy maintsy handao ny fihetsika mangatsiaka sy haka ny tena teny Tricks.
Ny dikan'ilay vehivavy
Vehivavy tia hanodidina ny tenany amin'ny alalan'ny iray Aura ny zava-miafina, farafaharatsiny amin'ny am-boalohany. Maro ny olona ho latsaka ho azy, fa raha vao lasa ny zava-miafina, ny zavatra mety ho mpandoaka. Izany, mitandrema! Raha ny lehilahy no nahasarika ny zava-miafina ny lafiny eo amin'ny toerana voalohany, dia mety ho tianao ny hitandrina ny sasany izany rehetra niaraka. Hampihatra ny zo maha-vehivavy, ary miezaka ny ho ampoizina mihitsy, fa ihany ombieny ombieny. A ela tanteraka ny zava-miafina ny olona afaka mihevitra ianao nanafina zavatra aminy, ary tsy misy olona tia izany fa.
Ny vehivavy tsy miankina
Olona tsy azo itokisana matetika toy ny misisika be ny vehivavy izay tsy afaka manao hetsika iray ny tenany. Maro dia hahatsapa bebe kokoa ry zalahy tia vehivavy tsy miankina, izay afaka manova ny jiro, ny tenany raha ilaina. Na izany aza, Mitandrema mba tsy ho ny fahaleovan-BE LOATRA asa, toy ny mpiara-miasa dia mety mahatsapa tsy mila azy eo amin'ny fiainanao. Na dia afaka mitantana fa hitondra kitapo mavesatra amin'ny manokana, mety hanaovanao mangataka ny fanampiany ombieny ombieny.